nidaamyada joogtada ah ee Archives - 192.168.8.1
nidaamyada joogtada ah
Cinwaanka IP-ga 192.168.8.1 ma IANA u diiwaangashan tahay kaliya adeegsi gaar loo leeyahay. Gudaha Shabakad Maxalli ah, kaliya waxaad isticmaali kartaa cinwaankan IP-ka ah & laguma isticmaali karo internetka. Waad isticmaali kartaa cinwaankan IP 192.168.8.1 furitaanka guddiga maamulka kombiyuutarka iyo sameynta wax ka beddel yar oo ku saabsan qaababkeeda asalka ah. Wax yar oo ka mid ah wax ka beddelka noocaas ah waxaa ka mid ah beddelka ereyga sirta ah & magaca adeegsadaha, dejinta shabakadda, ku dar darbiga, & dejinta qalabka.
192.168.8.1 Soo gal
IP 192.168.8.1 waxaa loo isticmaalaa in lagula xiriiro nidaamyo kala duwan oo ka dhex jira shabakadda gaarka loo leeyahay. Waxaa xitaa loo isticmaalaa in lagu habeeyo aaladda qalabka isku xirka iyadoo la soo bandhigayo habka galitaanka.
Ku habee router-ka illaa 192.168.8.1
Ka dib markii aad gasho interface router ee 192.168.8.1, waxaa la joogaa waqtigii la beddeli lahaa dejinta si loo ogaado doorashadaada koowaad. Xadhkaha tirada badan iyo soo gaabiyeyaashu waxay u muuqan karaan kuwo aan la soo dhowaan karin, laakiin waad iska nasan kartaa si fudud adigoo og in goobaha oo dhami ay dib u heli karaan dib-u-dejin badhanka badhanka. Laakiin way ku caawinaysaa inaad ogaato halka laga bilaabayo; markaa waxa ugu muhiimsan ee ay tahay inaad wax ka bedesho waa faahfaahinta soo galitaanka ee kor ku xusan:
Xullo goobaha guud
Xulo lambarka sirta ah ee router ama ikhtiyaar la mid ah
Qor lambarka sirta ah ee aad doorbideyso
Keydso wax ka beddelka.
Xitaa waa inaad kaheshaa magaca isticmaale routerka ku yaal meenish la mid ah oo aad ku badali karto magaca dookhaaga koowaad.
Beddel Cinwaanka IP-ga ee Deegaanka 192.168.8.1
Hal meel oo kale oo aad jeceshahay inaad wax ka beddesho waa cinwaanka IP-ga ee router-ka, iyadoo lagu sii darayo farqiga u dhexeeya dadweynaha & cinwaanka IP-ga ee hoos ku xusan. Haddii aad beddesho cinwaanka IP-gaaga ee router-ka, ma ogaan doontid sida loo helo router-ka 192.168.8.1, markaa waa inaad xaqiijisaa inaad xasuusato cinwaankaagii ugu dambeeyay. In la beddelo cinwaanka:
Booqo liiska dejinta ama xulasho isku mid ah
Ku dhufo goobaha xulashada shabakadda.
Hoos u dhig dejinta router, ku qor cinwaanka IP-ga aad doorbideyso
Kaydinta wax ka beddelka
Mid ka mid ah cinwaanada IP-ga ee caadiga ah ayaa ah 192.168.8.1, laakiin ka duwan 192.168.0.1 or 192.168.1.1 badanaa shirkadaha badanaa ma isticmaalaan cinwaankan gudaha ah. Waxay noqon doontaa caqli gal in la yiraahdo inta badan dhammaantood ma isticmaalaan. Si fudud waxani kuma raacsana iyaga, maaddaama ay leeyihiin shaqooyin isku mid ah - oo loo adeegsaday gelitaanka websaydhka kombiyuutarka.
Beddelida Magaca Shabakadda Wi-Fi
Iyada oo loo marayo dejinta router-ka dhabta ah ee wax laga beddelay, waxaad bilaabi kartaa inaad ku ogaato dheeraad ah magaca shabakadda Wi-Fi router-ka oo ah meel qurux badan oo laga bilaabo. Aqoonsiga Set Set-ka ama SSID waa magac ka soocaya shabakadda Wi-Fi ee router-ka kuwa kale ee ku dhow. Magaca ayaa noqon kara wax kasta oo aad jeceshahay haddii uusan ka xanaajinaynin. Sida caadiga ah, magaca ayaa laga yaabaa inuu yahay mid caadi ah si looga caawiyo kala soocida shabakadda waa inaad:
Booqo liiska dejimaha kale ee ikhtiyaariga ah ee lamagac baxay
Ku dhufo xulashada goobaha wireless-ka ah.
Ku qor magacyada shabakadda aad doorbideysid gudaha sanduuqa SSID
Ka dib markaad bedesho magaca shabakadaha Wi-Fi, xitaa waad hagaajin kartaa erey sir ah. Sanduuqa sirta ahi wuxuu ku jiri doonaa menu la mid ah magaca shabakadda.
Dejinta kore waxay kuu oggolaan doontaa inaad hesho ilaaliyaha kombiyuutarka ee abaabulan taas oo muhiim u ah in la hubiyo in qof shabakadda ka baaraya shabakaddaada uu si ammaan ah u sameynayo. Laga soo bilaabo halkan, waa lagugu soo dhaweynayaa inaad ogaato xulashooyinka router-kaaga wax badan. Qaar badan oo ka mid ah router-yada ayaa la socda goobaha waalidka ee aad dejin karto, iyo in yar ayaa oggolaan doonta dejinta dhowr shabakadood ama adeeg kasta oo VPN ah.
Inbadan oo ku saabsan IP 192.168.8.1
192.168.8.1 Tan waxaa lagu magacaabaa albaab, gaar, ama cinwaan IP ah oo maxalli ah kaas oo loo arko inuu yahay kan ugu sarreeya shabakadda Wi-Fi. 192.168.8.1 Waxaa loo isticmaalaa in la helo labadaba marinka router-ka & in loo oggolaado aaladaha awoodda u leh net-ka in ay ku xirmaan router-ka. Waxaad u tixgelin kartaa cinwaanka IP-ga ee router-kaaga sidii Sanduuqa PO ee boostada. Dhammaan baakadaha aad ka heleyso boostada waxay si toos ah u aadayaan sanduuqa PO, in kastoo halkii aad ka aruurin laheyd, router-kaaga ayaa markaa boostada u diri doona aaladda PC-ga ee dalbatay.
Haddii aad tahay hayaha qalabka leh Liiska IP & 192.168.8.1 waa cinwaanka khaldan, waxaad ka heli doontaa daaqad galitaan markii aad ku qoreyso cinwaanka cinwaanka biraawsarka. Markaas waxaad si fudud ugu baahan tahay inaad isticmaasho magaca caadiga ah & lambarka sirta ah.
Dhibaataynta ciwaanka IP-ga 192.168.8.1
Waqti ka mid ah waqtiga, waa wax caadi ah in lagu maro arrimo kala duwan oo ku saabsan router-kaaga. Haddii aadan dhaafi karin shaashadda galitaanka, waxaa jira waxyaabo aad u baahan tahay inaad tixgeliso. Hubi si aad u xaqiijiso in internetkaagu yahay mid deggan oo aan isbeddelin. Hal ikhtiyaar oo dheeri ah ayaa ah in la isticmaalo amarka degdegga ah si loo hubiyo albaabka laga baxo. Waxaa laga yaabaa inaad u isticmaalayso cinwaanka IP-ga ee khaldan marinka isticmaalaha. Caawinaad dheeraad ah, waxaad xitaa la xiriiri kartaa alaab-qeybiyahaaga internetka.
Waxaa jira shuruudo qaar oo ah inaan raacno si aan ugu galno cinwaankan IP-ga oo aan u sameyno wax ka beddelka lagama maarmaanka ah. Waxa ugu muhiimsan ee ah inaad ku sugnaato xaafadda shabakadda router ama aad gasho. Waa inaan ku xirnaano shabakado isku mid ah sida router-ka si aan u sameyno isbeddelada lagama maarmaanka ah ee qalabka kumbuyuutarka maadaama ay tahay cinwaan IP gaar ah. Caqabada ugu weyn ee la xiriirta cinwaankan IP-ga ayaa ah inaan laga heli karin WWW sidaa darteedna waxay nagu qasbeysaa inaan joogno aagga shabakadda router-ka si aan ugu dhowaanno websaydhka. Bog furaha shabakadeena waa inuu noqdaa mid dhib badan (Google Chrome, Mozilla Firefox, iwm) maadaama habkaani ubaahan yahay taageero HTML5 pop-up ah.
Haddii aad tahay maamulka router-ka oo leh cinwaanka IP-ga 192.168.8.1 ka dib adoo adeegsanaya cinwaanka IP 192.168.8.1, waxaad ku sameyn kartaa wax ka beddel kasta oo loo baahan yahay router-kaaga & xitaa wax ka beddel habka ugu habboon ee router-kaaga.
Ka sokow, waxaad ku samayn kartaa waxyaabo badan oo dheeri ah cinwaankan IP-ga ah sida beddelka adeegsadaha, lambarka sirta, xakamaynta goobaha shabakadda, qaabeynta nashaadaadka iyo waxyaabo kale oo badan.
Waa kuwan wax yar oo ka mid ah astaamaha caanka ah ee cinwaanka IP 192.168.8.1.
Bedelashada Furaha & Magaca Isticmaalaha.
Xakamaynta QoS & Shabakadaha Dejinta.
Furitaanka & Joojinta Qalabka Dhamaadka.
Dejinta Firewall & Dejinta Amniga
Habka Martida Wifi.
Iyo wax badan oo kale.
Waad wax ka beddeli kartaa & beddeli kartaa dejintan ka dib markii aad gasho mareegta maamulka ee router-kaaga oo uu iska leeyahay cinwaanka IP-ga 192.168.8.1. Iyo inaad gasho cinwaanka IP-ga 192.168.8.1, waxaad u baahan tahay inaad ku qorto cinwaanka cinwaanka IP-ga http://192.168.8.1 biraawsarkaaga ama guji si aad uhesho taageerada maamulka router-kaaga cinwaanka IP-ga 192.168.8.1.
Waa inaad mar kale u habeysaa routerkaaga adeegsi badan oo jilicsan. Waxaa jira goobo badan oo laga sameyn karo guddiga maamulka router-ka. Waxaad waxbadan ka baran kartaa barta internetka.
Liiska Magaca Isticmaalaha iyo Furaha sirta ah ee 192.168.8.1
Huawei TMAR # HWMT8007079 (midna)
Categories nidaamyada joogtada ah Leave a comment
Liiska Sirta ah ee Router-ka Default
Liiska Cinwaanada Ip
3Com Rogin Login
3JTech Router Soo Gal
Soo Galitaanka Arris Router
Asus Router Soo Gal
Belkin Router Soo Gal
Buffalo Router Soo Gal
Soo galitaanka Cisco Router
Comtrend Router Soo Gal
D-link Router Soo gal
Linksys Router Soo Gal
Soo galitaanka Netgear Router
Soo galitaanka TP-Link Router
TRENDnet Router Soo Gal
ZyXEL Router Soo Gal
IP-yada caanka ah
© 2022 192.168.8.1 • Lagu dhisay GeneratePress